I-Senate yase-US ibongoze ukuba ibambe iindlebe ekusetyenzisweni kweenqwelomoya ekusebenziseni imali ye-COVID
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Senate yase-US ibongoze ukuba ibambe iindlebe ekusetyenzisweni kweenqwelomoya ekusebenziseni imali ye-COVID
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukwaphula iindaba zase-US • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya zase-US zifumene ngaphezulu kwe- $ 79 yezigidigidi kwimali yokuhlangula kwiibhili ezintathu ezinxulumene ne-COVID kwi-2020-2021 ukubanceda, abasebenzi babo, kunye nomzi mveliso wokuhamba ngomoya basinda kwesona sibetho sibalaseleyo se-COVID.
I-FlyersRights ifuna ukubekelwa iindlebe zokubeka iliso kwii-CEO zeenqwelomoya, abameli babasebenzi kunye nabakhweli.
Iinqwelo-moya zanikwa inkxaso-mali enkulu ukususela ngo-2020.
Kukho imibuzo yokuba ngaba imali yabarhafi isetyenziswe gwenxa ziinqwelomoya.
I-FlyersRights UMongameli uPaul Hudson ubize iKomiti yeeNdlu zoRhwebo yase-US yokujongana nokumamela kunye nee-CEO zeenqwelomoya kunye nabameli babasebenzi.
IiflayaMalungelo oMongameli uPaul Hudson
UPaul Hudson ucacisile, “Iinqwelo-moya zanikwa inkxaso-mali enkulu ukusukela ngo-2020 ukugcina inkonzo yomoya yoluntu yomelele kwaye kunciphisa nosulelo lwe-COVID. Kodwa ukurhoxiswa kweerekhodi zakutshanje, ukulibaziseka kwenqwelo-moya, kunye nokuchaswa kweenqwelo-moya kwezinye izikhokelo zeCDC kusenza sithandabuze ukuba ngaba imali yomhlawuli werhafu iye yasetyenziswa gwenxa ngabaphathi beenqwelo-moya. ”
Iinqwelo-moya zase-US zifumene ngaphezulu kwe- $ 79 yezigidigidi kwimali yokuhlangula kwiibhili ezintathu ezinxulumene ne-COVID kwi-2020-2021 ukubanceda, abasebenzi babo, kunye nomzi mveliso wokuhamba ngomoya basinda kwesona sibetho sibalaseleyo se-COVID. ICongress ijonge le mali ukuba iye kubaqhubi beenqwelomoya, abagadi beenqwelomoya, nakwabanye abasebenzi beenqwelomoya kunye nabasebenzi kwisikhululo seenqwelomoya ukuqinisekisa ukuba bahlawulwa ngexesha lokudakumba kakhulu kunye nokuqinisekisa ukuba iinqwelomoya ziya kuba namandla okuhlangabezana neemfuno ezandayo zokuhamba ngokukhawuleza kwi-COVID -19 imeko iphuculwe.
Iinqwelomoya, ngakumbi American Airlines, I-Airlines, kunye ne-Southwest Airlines, basilele ngokupheleleyo abantu baseMelika. Ngalo lonke ixesha lasehlotyeni, iinqwelo-moya ziye zarhoxisa amakhulu eenqwelo-moya ngosuku kuba zingenabasebenzi baneleyo abakulungeleyo ukuhamba. Ngosuku olubi kakhulu, uMoya Airlines Irhoxisiwe ngaphezulu kwesiqingatha seenqwelo moya ezicwangcisiweyo.
Oku akwamkelekanga, kwaye uSenator Maria Cantwell, uSihlalo weKomiti yezoRhwebo ye-Senate, wathumela ileta malunga nalo mbandela kwiinkampani zeenqwelo moya ngoJulayi. IFlyersRights.org idibene nabasebenzi bayo ukuxoxa ngalo mbandela kunye nokuphakamisa isisombululo kutshanje sokuxhatshazwa kweenqwelomoya.
IFlyersRights.org ukuvavanywa kwekomiti yokubeka iliso ukunyanzela uDoug Parker, uGary Kelly, uTed Christie kunye nabanye abaphathi beenqwelo moya ukuba bachaze ngento abayenzileyo ngemali yokunceda ye-COVID nokuba kutheni iinqwelomoya zabo zisilele ukuhambisa oko umthetho wawufuna.
Iindibano zokongamela kufuneka zibandakanye nabameli babakhweli kunye nabameli babasebenzi. IFlyersRights.org icebise ukuba Inkuthazo kunye nesicwangciso sokuphambuka ekuhlaleni oko bekuya kugcina iinqwelomoya zinenzuzo, zibaleka kwindawo ephezulu ngexesha lobhubhane, kwaye bekuya kuqinisekisa ukuhamba komoya kukhuselekile, konke ngexabiso eliphantsi kuneepakethe zoncedo.
Ukuya eHawaii xa ugonyiwe: Imithetho emitsha